Kai: နနွင်း + နွားနို့ ဖျော်ရည် အကောင်းဆုံးအိပ်ယာဝင် relaxant
အိန္ဒိယလူမျိုးတွေ မှာ အနောက်တိုင်း အရှေ့တိုင်း နိုင်ငံပေါင်းစုံနဲ့ မတူတဲ့ ဆေးဘက်ဆုိုင်ရာ အယူဝါဒတွေ ကြွယ်ဝတယ် ။ သူတို့ဆီက ဆေးနည်းများစွာမှာ ထိပ်ဆုံးမှာ နံပါတ်တစ်နေရာ မှာ ရှိနေတဲ့ ဆေးတပါးကတော့ နို့နနွင်းပါပဲ ။
နနွင်းဟာ ခန္ဒာကိုယ်နာကျင် ပင်ပန်းခြင်း ၊ဖျားနာကိုက်ခဲခြင်း ၊ အလုပ်ပင်ပန်းခြင်းတို့ အတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်စာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆစ်မြစ်ယောင်နေတာတွေရှိရင် ဆေးသောက်စရာ မလိုပဲ ပျောက်သွားမှာပါ ။ အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်နေတာတွေ အစာမကြေဖြစ်နေတာတွေ အတွက်လဲ အလွန်ကောင်းတဲ့ ဆေးတပါးပါ ။ ဘိုက်ပြည့်ဘိုက်ကယ်နေတာတွေ အတွက်တော့ နတ်ဆေးတပါးပါပဲ ။
တခါတလေ ဘိုက်ပြည့်ဘိုက်ကယ်တာ နေရထိုင်ရခက်တဲ့ အပြင် လေးလံ ထိုင်မှိုင်းပြီး မပျော်တဲ့ ရောဂါ ကို ခံစားရပါတယ် ။ လူကြည့်လိုက်ရင်လဲ ဖြတ်လတ်မှုမရှိပဲ ဘိုက်ကြီးပူပြီး အပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူး ။ ဒါဆိုရင် နို့နနွင်းသောက်ပါ ။
အစာအိမ်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ အပူနာတွေကိုလဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ် ။ မေ့လျော့ခြင်းများ ကိုလဲ သက်သာလာစေပါတယ် ။
သဘာဝ အယောင်ကျဆေး ၊ သဘာဝ အင်တီဘိုင်အိုးတစ် ၊ သဘာဝအနာကျက်ဆေး ၊ သွေးသန့်ဆေး ၊ အသားအရေအတွက်အားဖြည့်ဆေး လဲဖြစ်ပါတယ် ။
ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ ဆုံဆို့ ကြက်ညှာချောင်းဆိုး တွေကိုလဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ် ။
ကိုလှစောလို့ခေါ်တဲ့ သွေးတွင်းအဆီဓာတ် ကိုလက်စထရော ကိုလဲ ကျစေပါတယ် ။ ခုခေတ်မှာ အသက် ၃၀ ပတ်ဝန်းကျင်တွေက အစ ကိုလက်စထရော များတဲ့ ဒုက္ခကို ကြုံတွေ့ နေရပါတယ် ။ ဆရာဝန်က ပြောလာပြီ ဆိုရင်တော့ ဆေးတွေ သောက်နေမယ့် အစား ဒီနို့နနွင်းလေး ကောက်ဖျော်သောက်လုိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော် ။
အက်ကဇီမား စတဲ့ အရေပြားယောင်ကမ်းယားနာတာတွေအတွက်လဲ အလွန်ကောင်းတဲ့ဆေးပါ ။
ရင်သားကင်ဆာ ၊ ပရိုစတိတ်လို့ခေါ်တဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ၊ အရေပြားကင်ဆာ ၊ အူမကြီးကင်ဆာ ၊ အကျိတ်ကင်ဆာ နဲ့ သွေးကင်ဆာတွေဖြစ်ခြင်းမှလဲ ကာကွယ်ပေးပါတယ် ။
အဆီခြေဖျက်နှုန်း ကို ကူညီပေးသလို ခန္ဒာကိုယ် အလေးချိန်ထိန်းခြင်းကိုလဲ အကူညီပေးပါတယ် ။
အသည်းမှာ များလာတဲ့ အဆိတ်အတောက်တွေ ဖယ်ရှားရာမှာလဲ အသုံးဝင်တဲ့ အပြင် သွေးချို ဆီးချိုကိုလဲ ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ် ။
ကင်ဆာဝေဒနာသယ်များ အတွက် ကုထုံးဖြစ်တဲ့ Chemotherapy ခမ်မို ဓာတ်ကင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွေ့ရခြင်းကိုလဲ လျော့နည်းစေပါတယ်နော် ။
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ နနွင်းဟာ သင့်လက်တကမ်းမှာ ရှိနေတာပါ ။ မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စားတဲ့ ။
နနွင်းကို အဝင်ကောင်းအောင် လုပ်နည်း အမျိုးမျိုးတော့ ရှိမှာပါ ။
ကတိသစ္စာတည်သောအခါ နွယ်မြင်သစ်ပင် ဆေးဘက်ဝင်သည်လို့ အဆိုရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် သစ္စာရှိသော ရောင်းတဲ့ အသည်ဆီက နနွင်းမှုန့် အစစ်ကိုတော့ ဝယ်ဘို့လိုပါလိမ့်မယ်နော် ။ နို့မို့ရင် ဆန်မှုန့်ကို အဝတ်ဆိုးဆေး ဆိုးထားတာတွေနဲ့ တွေ့ရင်.... ပျောက်တော့ ပျောက်တယ် အသက်ဖြစ်နေပါဦးမယ် ။ :D
ဒီဆေးနည်းက အိန္ဒိယရိုးရာ ဆေးနည်းဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာ့ ရှေးနည်းလဲဖြစ်ပါတယ် ။ တိမ်မြုတ်ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ Golden recipe လေးပါ ။ ရှေးက မီးဖွားပြီးတဲ့ မိခင်တွေ အတွက် အပူအပုတ်တွေ စင်သွားအောင် နနွင်းကို လုံးပြီး ဒီတိုင်းသောက်ခဲ့ရတာပါ ။ နနွင်းရဲ့ အာနိသင်တွေ က အင်တီဘိုက်အိုတစ် အင်တီဆက်ပတစ် ဖြစ်တယ် အယောင်အယမ်းကျတယ် ၊ အပုတ်စင်တယ် သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းတယ် ဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ ပြန်လည် သုံးစွဲသင့်တဲ့ဆေးပါ ။ အနာလဲ ကျက်တယ် ၊ ဖောယောင်တာတွေလဲကျတယ် ၊ လေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ရောဂါတွေလဲ နိုင်ပါတယ် ဆိုတော့ ကျမတော့ ခလေးမွေးထားသူ မဟုတ်ပေမယ့် စမ်းသောက်ဘို့ ကြံစည်နေပါပြီ။
နွားနို့ နွေးနွေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သာမာန် အပူချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်... တခွက်ပဲ အရင်ထည့်ပါမယ် ။
ပုံထဲမှာ ဇီးသီးမှုန့် ပါတယ် ။ အအီပြေအောင်နေမယ် ။ ဒါပေမယ့်ဇီးမှုန့် ရှာရခက်လို့ ကျမတော့ မထည့်ဘူး ။
ပျားရည်စစ်စစ် တဇွန်း (သို့) ကြိုက်သလောက်ထည့် အချိုကြိုက်ရင် ပိုထည့်
နနွင်းမှုန့် စစ်စစ် ကော်ဖီ ဇွန်းဖျားလေးနဲ့တဝက်
အနံ့မွှေးအောင် သစ်ဂျဘိုးမှုန့်လေး ဇွန်းဖျားလေးနဲ့ နဲနဲလေး
ဂျင်းမှုန့် စီးတီးမတ်မှာ ရနေပြီ အဲတာကလဲ ဇွန်ဖျားလေးနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်သလောက်သာထည့် ကျမကတော့ဂျင်းကြိုက်တယ်
ပြီးရင် ခေါက်မွှေပြီးသောက်လုို့ရပါပြီ ။ အဓိကကတော့ ဂျင်းရယ် နနွင်းရယ် နွားနို့ရယ် ပဲကျန်တာကတော့ အနံ့ရယ် အရသာရယ်က အဝင်ကောင်းအောင် လျှောက်ထည့်ကြတာပါ ။
အနံ့ကတော့ ဘယ်လိုလာမလဲ မသိဘူး နှာခေါင်းပိတ်သောက်ရင်သောက်ရမှာပဲ ၊ မတတ်နိုင်ဘူးလေ ကျမက ဆေးတွေသောက်ရတာ မကြိုက်ဘူး ။
စမ်းသောက်ကြည့်လို့ အဆင်မပြေရင်တော့ နနွင်းကို ပျားရည်နဲ့တေပြီး အခြောက်လှန်းပြီး အလုံးလေးတွေလုံးပြီးသောက်မယ် ။
တချို့နည်းတွေမှာလဲ အမှုန့် မရသူတွေ အတွက် နနွင်းတတ် ဂျင်းတတ် နဲ့ ငရုပ်ကောင်းတွေကို နွားနို့ထဲထည့်ုပြီး မီးအေးအေးလေးနဲ့ ပွက်လာတဲ့ အထိကျိုပါ ။ ပွက်ပြီး ခဏလောက်နေမီးဖိုပေါ်က ချပြီး စားပွဲပေါ်မှာပဲ အအေးခံထားပါ ။ နောက်အေးသွားပြီဆိုရင် နို့ထဲက အဖတ်တွေ ကိုဆယ်ထုပ်ပြီး ပျားရည်နဲ့ ရောသောက်နိုင်ပါတယ် ။
သဘောတူတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်လဲ လက်ဆောင် အဖြစ်ရေးပေးတာပါနော် ။ ကျန်းမာရေးပေါ့လေ.... :D :D
သူငယ်ချင်းတပုဒ်ငါတပုဒ် ပြိုင်ရေးနေတယ်နော် ။။။။ ဒါပဲ :D :D
Posted by Kai at 8:42 AM
Labels: Beauty, Health, life style, ဆေးနည်းတို
Nge March 12, 2014 at 7:42 PM
Wow! New post ... love it.
ဟိုနေ့က အိမ်ကို အဒေါ်လာတော့ သူ့တူမ နေမကောင်းတာကြည့်ပြီး အစာအိမ်မကောင်းရင် သူဖော်ထားတဲ့ နို့နနွင်းဆေးလုံး သောက်လို့ပြောတယ်။ မသောက်ချင်ပါဘူး လုပ်နေတာ အခုတော့ ရွာကို လှမ်းမှာတော့မယ်။
ဘိုင်သယ်ဝေး ညက စာရေးတာ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ မနက်ရုံးရောက်မှ တင်ရတယ် :P ... စိတ်ချင်းများ တူချက်။
Kai March 13, 2014 at 3:47 AM
ကဲ သဘောကျလိုက်တာ နော် ခွိခွိ ပြောတော့ ဘူး ပြောတော့ဘူး
စူးနှယျလေး March 13, 2014 at 12:17 AM
တို့ သူငယ်ချင်းတွေ သောက်ကြတယ်.. အပျိုဘော်ဝင်ကတည်းက
တို့တော့ အလုံးလေးလုပ်သောက်မှ ရလောက်မယ်
Kai March 13, 2014 at 3:48 AM
သောက်ကြစုို့ သောက်ကြစို့ ဒါမှ မဟုတ်ရင်လဲ ဘိုက်ထဲဝင်အောင် တနည်းနည်းနဲ့ လုပ်ကို လုပ်ရမယ် ရှမ်းမလေးတွေလို လှချင်လို့ အဟီးး
rose of sharon April 8, 2014 at 8:02 PM
Kai April 9, 2014 at 1:18 AM
ငါတော့ တခွက်သောက်ဘူးပြီ :S